China inopedzisa satellite navigation system inogona kukwikwidza US GPS - teles relay
China inopedzisa satellite navigation system inogona kukwikwidza US GPS
SAYENSITECH & TELECOM
China's BeiDou satellite navigation system inogona kuwedzera Beijing kuchengetedzeka uye geopolitis simba.
China iri kupemberera kupedziswa kwayo BeiDou satellite navigation system inogona kukwikwidza neUS Global Positioning System (GPS) uye nekukwiridzira zvakanyanya kuchengetedzeka kweChina uye pesikopiki.
Mutungamiri Xi Jinping, mukuru wesangano rinotonga reChikominisiti uye rePeople's Liberation Army, akaisa mutemo uyu neChishanu panguva yemhemberero muGreat Hall yeVanhu muBeijing.
Izvi zvakateedzera chirevo chekuti 55th uye yekupedzisira geostationary satellite muboka rakatangwa musi waChikumi 23 yakanga ichishanda mushure mekupedza bvunzo dzese.
Iyo satellite iri chikamu chetatu yechitatu yeiyo BeiDou system inozivikanwa seBDS-3, iyo yakatanga kupa mabasa ekufambisa muna 2018 kuenda kunyika dzaitora chikamu muChina chinowanika Belt uye Road zvivakwa. nevamwe.
Kuwedzera pakuve rubatsiro rwekufamba-famba nehuremu hwakanyanya hwekujeka, iyo sisitimu inopa kutaurirana nekutumira mameseji mapfupi anosvika kuma1 maChinese mavara uye mukana wekuparadzira mifananidzo.
Mutauriri webazi rezvekunze, Wang Wenbin, akati hurongwa uhwu hwatove mukushandisa kupfuura hafu yenyika dzepasi rose uye vakatsigira kuzvipira kweChina mukushandiswa kwerunyararo kwenzvimbo uye kuda kushanda nedzimwe nyika.
"China inoda kuenderera mberi kusimbisa kushandurwa kwenzvimbo uye kushandira pamwe nekugovana zvawanikwa pakuvandudza nzvimbo nedzimwe nyika pahwaro hwekuremekedzana, kuvhurika, kusanganisa, l 'kuenzana uye kubatsirana,' akadaro akadaro kumusangano wekutaura kwemazuva ese.
Algeria: Tebboune anoda kugadzirisa machina ekutonga - Mudiki…
China, Russia neIran "vari kuedza kupesvedzera ...
China vs. United States: Kushungurudza kweMhirizhonga Yemauto!
Ipo China ichiti iri kutsvaga kubatana nedzimwe satellite navigation system, BeiDou inogona kupedzisira yakwikwidzana neGPS, Russia yeGONONASS pamwe neEuropean Union's Galileo network. Zvakafanana nemaitiro ekuChina vekugadzira mbozhanhare nevamwe vanogadzira hunyanzvi hwekutapa zvehunyanzvi vakatora kune avo vanobva kunze kwenyika.
Yenyika-inomhanya Xinhua News Agency yakati BeiDou inowirirana nemamwe matatu maitiro asi haana kupa ruzivo rwekuti vaizoshanda sei pamwe.
Kune China, imwe yezvakanakisa zvehurongwa, kuvakwa kwayo kwakatanga makore makumi matatu apfuura, ndiko kugona kutsiva GPS kuti itungamire makomba ayo, ayo anonyanya kukosha iye zvino munharaunda yekukura kusawirirana neWashington. .
Izvo zvakare zvinokwanisika kusimbaradza China nehupfumi pamwe nezvematongerwo enyika kupesvedzera nyika vanotora sisitimu iyi, kuve nechokwadi chekuti vanowirirana kuseri kweChina chinzvimbo paTaiwan, Tibet, South China Sea uye dzimwe dzinotyisa nyaya kana njodzi kurasikirwa kwavo kuwana.
Kiyi yekubudirira kweChina kwave kusimudzira kwakaitwa neChinese Academy ye Space Technology yeRubidium Atomic Clocks inopa nguva uye mafambiro akawanda eBDS satellite, Xinhua akadaro.
Vati chirongwa ichi chiratidzo chekuti kuedza kweWashington kumisikidza "kuvharika kwepamhepo" nekukanganisa kumakambani eChinese akadai seHuawei kwakundikana.
“Zvisinei nezviyero izvi, hunyanzvi hweChina hwakatowedzera kusimba. Sezvakataurwa neMutungamiriri Xi munguva pfupi yadarika pamusangano wekudyara nezvehupfumi hweChina: "Hapana nyika kana munhu anogona kumisa kufambiswa kweruzivo rwekuvandudzwa kukuru kwerudzi rweChina," Xinhua akandiudza. .
kunobva: https: //www.aljazeera.com/ajimpact/china-completes-sat-nav-system-rival-gps-200731152044120.html
US kunyura inosvika kumadhora mazana maviri nemakumi mashanu emadhora ekuwedzera kweanogona kutora COVID-2,1 yekudzivirira
EU: Coronavirus inokiya inokanda eurozone mukudzikama
Masayendisiti anofunga kuti chirwere checoronavirus chingashande kune rimwe boka revanhu -…
Funga kuti hupenyu huchadzokera kune yakajairika kana tangove neconavirus yekudzivirira? Heano chikonzero nei ...